काठमाडौं : कतारमा रहेका सयौं नेपाली कामदारलाई त्यहाँका कम्पनीले स्वेच्छाचारी ढंगमा निष्कासन गरिदिएको खुलासा भएको छ ।
उनीहरुलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न भन्दै कतारी अधिकारीहरुले नियन्त्रणमा लिइ निष्कासन गरिएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेश्नलले यसबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ उक्त संस्थाले केही नेपाली कामदारको अन्तर्वार्ता लिँदा उनीहरुले आफूहरु पक्राउ परेको र हिरासतमा पुगेको बताएका छन् ।
परीक्षणका लागि भनेर लगिए पनि उनीहरुलाई हिरासतमा लगिएको ती कामदारले एम्नेस्टी इन्टरनेश्नलसँग बताएका छन् । कतिपय कामदारलाई त आवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरुको साथबाट मोबाइल र कागजात समेत जफत गरिएको उनीहरुले बताएका थिए । साथै फोटो खिचेर औँठाछाप समेत लिन लगाइएको थियो ।
भीडभाडसहित कामदारहरुलाई हिरासतमा थुनिएको पनि बताइएको छ । एम्नेस्टीले २० नेपाली कामदारको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । जहाँ उनीहरुले आफूहरुमाथि अमानवीय व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकारीहरुले निष्कासन गरेका थिए । केहीले भने आफूलाई एयरपोर्टमा पुगेपछि मात्रै निष्कासन भएको जानकारी पाएको बताए । यस्तो हुँदा उजुरी समेत दिन नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कतारी अधिकारीहरुले भने औधोगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरुले ‘गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न’ भएकाले निष्कासन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर एम्नेस्टीको रिपोर्ट अनुसार ती कामदारहरुलाई अधिकारीहरुले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै आरोप लगाएको पाइएको छैन ।
बजार तताउदैछ, ‘साह्रै मन अत्याउने’ लोक दोहोरी गीतले (1,383)
कोरोनाले मृत्यु भएमा शब के गर्ने ? मन्त्रालयले यस्तो बनायो १९ बुँदे नियम (929)
श्री जनता मा. बि रागेचौरको कृषि भबनको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न (548)
“जीबन कथा” (538)
सल्यान, २४ साउन । सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरेको बताएका […]
अवस्था सहज भएपछि करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं: कर अधिकृत खडानन्द खरेल
सल्यान, २४ साउन । सल्यानमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन भएको छ । यसले कुन कुन […]
काठमाडौं, २३ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरूलाई कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा तत्काललाई नलिन […]
नेकपाका अध्यक्षद्वयको वार्ता अझै टुङ्गो लागेन, सम्पादकसँगको बैठक स्थगित
काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच साउन १८ देखि तीन […]